Noorweey: Gabdho looga shakiyey gudniin oo aan waxba lugu helin | Somaliska
Nolosha / Norway
Noorweey: Gabdho looga shakiyey gudniin oo aan waxba lugu helin
Wararka aan ka heleyno Noorweey ayaa sheegaya in cisbitaalada dalkaasi sheegeen gudniin lugu sameeyo gabdho soomaali ah oo tiradooda gaareyso 120 gabdhood. Magaaladda Bergen ee dalkaasi Noorweey ayaa aabe soomaaliyeed oo dagani waxaa lugu sameeyey baaritaan la xirriira gudniin uu ku sameeyey gabar uu dhalatay.
Aaabahana soomaaliyeed ee muddo sanad iyo bar ah waxaa gabar uu dhalayl ugu sameeyey labbo jeer baaritan ku saleeysan gudniin looga shakiyey in uu ku sameeyey.
Dhinaca kale isbitaal ku yaala magaaladaasi ee la yiraahdo Haukeland universitetssjukehus ayaa warbixin uu soo gudbiyey ku sheegay in tan iyo sanadkii 2008-dii gudniino lugu sameeyey gabdho soomaali ah, kuwaas oo markii dambe cadaatay in aaneey sal iyo raad toona laheyn.
Aabahan soomaaliyeed oo lugu magcaabo Abdul Kadir Axmed, ayaa saxaafadda u sheegay in kooxaha gudniinka baara ay isaga qoyskiisa labbo jeer baaritaan ku sameeyeen, ka dib markii ay xarrumaha rowdada ah ee ay gabadhiisa dhigato ka gudbiyeen warbixin aan jirin. Wuxuu sheegay in waajib ay tahay in shaqaaluhu aqoon dheeri ah u yeeshaan arrimaha shakiga ka yimaado ama ay baaritaanka ku sameeynayaan.
Sharci cusub oo lagu ganaaxayo dadka qashinka tuura
Masjid cusub oo laga furay Göteborg [Video]